Sheekada Filimka Baazaar: Saif Ali Khan isku daygiisa ma xumo laakiin wuu kala dhiman yahay fariin ahaan – Filimside.net
Sheekada Filimka Baazaar: Saif Ali Khan isku daygiisa ma xumo laakiin wuu kala dhiman yahay fariin ahaan
October 26, 2018 Zakarie Abdi
Taariikhda: October 26, 2018
Hordhac: Suuqa dhaqaalaha iyo isbadalka ka jiro waa mid xiiso badan balse waa markii ugu horeesay Bollywood-ka sameeyaan fariin ku qotonto suuqa sicirka iyo arimaha dhaqaalaha Mumbai. Haddaba Saif Ali Khan iyo Director Gauravv K Chawla waxay la imaadaan filimka BAAZAAR oo arimaha dhaqaalaha suuqa iyo isbadalada joogtada ah ku imaanayo ka hadlaayo waana fariin hanaanka loo dhigay la wada xiiseenayo in la arko.
Jilaayaasha: Saif Ali Khan, Rohan Mehra, Radhika Apte, Chitrangda Singh, Manish Chaudhari.
Waqtiga Uu Soconaayo: 2-saac iyo 17-daqiiqo.
Fariinta Filimka Baazaar Oo Kooban: Waa fariin ka hadleyso baahi, cirweynin ama dhuuninimo iyo awood lahaansho sidoo kalena aan la isku naxariisaneyn. Rizwan Ahmed (Rohan Mehra) wuxuu dalaal dhanka suuqa dhaqaalaha ka yahay magaalada Allahabad ku yaalo, mana ku faraxsano daqliga yar ee maalinlaha ah ee kasoo galo hawshiisa dalaalnimo sidaa darteed Mumbai ayuu lacag iyo hami dheeri ah usoo raadsanayaa.
Rizwan Ahmed (Rohan Mehra) marka uu Mumbai imaado wuxuu fursad u helayaa inuu la shaqeeyo Kishore Wadhwa (Denzil Smith) oo iska leh shirkad ganacsi. Halkaas marka ay sheekada mareyso Rizwan Ahmed (Rohan Mehra) wuxuu shirkada kula saaxiibaa gabadha lagu magacaabo Priya Rai (Radhika Apte) kadibna jaceyl ayaa dhex maraayo.
Rizwan Ahmed (Rohan Mehra) habeen ayuu xaflad tagayaa isaga iyo saaxiibtiisa wuxuuna xafladan ku baranayaa ganacsadaha weyn ee awooda badan sidoo kalena suuqa dhaqaalaha iyo sicirka lacagta Mumbai gacanta ku haayo mudane Shakun Kothari (Saif Ali Khan).
Rizwan Ahmed (Rohan Mehra) wuxuu soo jiidanayaa mudane Shakun Kothari (Saif Ali Khan) asigoo sadaalinayo isbadalada suuqa dhaqaalaha ku imaan karo wuxuuna Shakun Kothari (Saif Ali Khan) dareemayaa in wiilkan xirfad iyo aqoon dhaqaale ku jirto kuna shaqeesan karo.
Dhinaca sarkaalka ciidadama dambi baarista ka tirsan Rana Dasgupta (Manish Chaudhari) wuxuu ka warqabaa qaladaadka u sameeyo Shakun Kothari (Saif Ali Khan) iyo sida uu suuqa ugu tanto awood ahaan asigoo dhaqaalaha dhinacii uu doono u leexiyo isbadalada ku imaadaan laakiin sarkaalkan wax caddeyn oo uu ku xiro mudane Shakun Kothari (Saif Ali Khan) kuma haayo.
Shakun Kothari (Saif Ali Khan) iyo Rizwan Ahmed (Rohan Mehra) oo suuqa isla maamulaan dhaqaalihiisa iyo isbadalka sicirka lacagaha halka sarkaal Rana Dasgupta (Manish Chaudhari) uu dabagal ku haayo sidii uu labadan gacanta ugu soo dhigi lahaa caddeymana u heli lahaa oo uu dambigooda banaanka kusoo dhigi karo.
Maxaa Laga Yiri Fariinta Filimka Baazaar: Qoraa Parveez Shaikh sheekada uu doortay waa mid xiiso leh sidoo kalena uma eko fariin ahaan filimka Hollywood-ka ee caanka ah WALL STREET (1987) sidoo kalena fariintan waa mid Bollywood-ka ku cusub oo muujineyso in hada filim sameeyayaasha maskaxdooda baahinayaan.
Director Gauravv K Chawla filimkan isku daba ridkiisa halka saac ee hore ayuu heer sare ka dhigay laakiin halka saac dambe waa mid lagu caajisayo waxay ahayd qaybta dambe oo ah halka fahanka iyo dulucda sheekada ku biyo shubaneyso inuu adkeeyo kana dhigo mid xiiso leh laakiin nasiib daro sidaas ma aysan noqonin.
Saif Ali Khan inaba caadi ma ahan bandhig saameyn weyn leh ayuu la yimid hadaladiisa, ficiladiisa iyo dareenka uu muujinaayo ayaa ah waxa ugu weyn ee Baazaar loo daawanayo, hubaal ahaan wuxuu la yimid mid ka mid ah bandhigyadiisa ugu fiicnaa ebid ee uu shaashada ka muujiyo kani waa waaya arag door walbo dhabarka u dhigan karo.
Rohan Mehra bilaabashadiisa nolosha Bollywood-ka ma xumo si wanaagsan ayuu fanka kusoo galay waxaana hubaal ah inuu fanka sal dhigan karo haddii uu sida Baazaar oo kale aflaanta u jilo waxaana wiilkan aabo u ah jilaagii 70-maadkii iyo 80-maadkii Bollywood-ka caan ka ahaa Vinod Mehra.
Radhika Apte si kalsooni ku dheehan ayay doorkeeda u matashay balse waxaa ka saameyn badan atirishada kale Chitrangda Singh inkastoo doorkeeda kooban yahay.
Muxuu Ku Wanaagsan Yahay Baazaar: Bandhiga adag ee Saif iyo Rohan Mehra la imaadeen isku dayga geesinimada leh ee Director Gauravv K Chawla sameeyay iyo halka saac oo heer sare ah.
Muxuu Ku Liitaa Filimka Baazaar: Qaybta labaad waaba la iska hilmaamay in masuuliyad la iska saaro waxaana fiicneyd inay fariinta u dhigaan hab qayaano adag iyo xeelad xamaasad leh inuu ku dhamaado balse midaas ma dhicin.
Qiimeynta Sheekada Filimka Baazaar: 2.5/5 (Labo Xidig iyo Bar)
Gunaanad: Baazaar waa fariin Bollywood-ka ku cusub oo qaybta hore aad u wanaagsan si qurux badana loo dhigay balse nasiib daro qaybta dambe oo sheekada dabacsan tahay isku xar adagna loo sameynin ayaa ka dhigtay isku daygaan cusub inuu fashil kusoo idlaado.
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka Baazaar kadibna fikiraaga nala wadaag fariinta filimkan xambaarsan yahay:
Waxaa Aqrisay 763